Sidee Loo Dhisi karaa Somaliland La Wada Leeyahay? – somalilandtoday.com
Ugu horayn waxa waxa loo baahan yahay in uu hogaamiyaha dalku dareensanaado in ay jirto wada lahaansho iyo sinaan cadaalad ku dhisan oo loo siman.
Ugu horayn waxa waxa loo
baahan yahay in uu hogaamiyaha dalku dareensanaado in ay jirto wada lahaansho iyo sinaan cadaalad ku dhisan oo loo siman yahay dalka hayadihiisa oo dhan min madaxweyne ilaa waashmaan waa in loo sinaadaa shaqada dawlada iyo wadalahaanshaha dalka guud ahaantiisba.
Burburkii somalilia waxa aynu la soo noqonay xoriyaddii aynu lixdankii hibayney ee aynu midnimadda dhaafsanay, dhiig badan ka dib waxa aynu helay dal iyo dad madaxbanaan oo dawladnimo doon ah inkasta oo aynaan ictiraaf helin, haddana waxa aynu helay waa qaran taabo gal ah oo qaan gaadh ah, oo aan maanta cidna marti uga hayn dawladnimadiisa. Balse waxa ayaan daro ah in Afartii hogaamiye ee qaranka maamulkiisa soo qabtay aanay ku bixin dedaalkii iyo kartidii loo baahnaa in la geliyo Midnimada dalka iyo Raadinta Ictiraafka aynu soddonka sano raadinayney oo ninba meel uu diirada saaraayey balse aanu nina ku guulaysan.
Balse waa halxidhaale looga tegey Madaxweynaha maanta haya hogaamintii dalka oo looga fadhiyo ku dhicii iyo geesinimadii iyo go’aan qaadashadii loogu codeeyey looguna ololeeyey, su’aashu se waa ma muuqataa hogaamin arintaasi iyo hawlaha gudaha ee cakirn ka fal celinkartaa oo dalkan u jeexi karta diriiq lagu guulaysan karo.